ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ခရီးသွားခြင်းကလည်းသင့်အတွက်ဆေးကုနည်းတစ်မျိုးပါပဲ… – Trend.com.mm
Posted on November 10, 2018 November 6, 2018 by Shun Lei Phyo
လောကကြီးမှာ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေးတွေရှိပြီးနေပြီးသားပါ။ ဆေးသောက် ဆေးထိုးမှရယ် မဟုတ်ပဲ သဘာဝကြီးကပေးတဲ့ ဆေးတွေရှိတတ်ကြသေးတယ်ဆိုလည်းမေ့ထားလို့တော့မရပါဘူး…ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသကို သွားခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်လာစရာတွေရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားရင် ဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ..အထူးသဖြင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးသုခတွေဖြစ်လာနိုင်စေသလဲဆိုတာ….
(၁) ပင်လယ်လေက သင့်ရဲ့အဆုတ်ကိုသန့်စေပါတယ်
ပင်လယ်လေအေးအေးလေးက A Little လေးတော့ အသားတွေမဲပင်မဲ့ သန့်ပြန့်တဲ့ပင်လယ်လေကို တ၀ ရှူရှိုက်ရတာဟာသင့် ရဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုစေနိုင်ပါတယ်။
(၂) ပင်လယ်ရေ ကအနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်
ပင်လယ်ဆားငံရေတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရည်ပြားရောဂါ ၊ အနာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဆားငံရည်တွေနဲထိတွေ့ခြင်းကအကြောအချင်တွေကို အညောင်းပြေစေပါတယ်။ အရင်က ကိုက်ခဲနာကျင်မှုကို ခံစားခဲ့ရသူတွေတောင် ပင်လယ်ရေနဲ့ထိပြီးယူပစ်သလိုသက်သာပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
(၄) စိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးစေပါတယ်
ပင်လယ်ကြီးကို မြင်လိုက်တာနဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းကြည်နူးသွားမှာတော့အသေချာပါပဲ။ ပင်လယ် ဒေသရဲ့အငွေ့သက်ကို ရှူရှိုက်ခံစားဖူးတယ်ဘယ်သူမဆို စ်ိတ်ဖိစီးမှုတွေကင်းဝေးပြီး စိတ်အေးချမ်းသာမှုရှိစေမှာအသေချာပါပဲ….
လောကကွီးမှာ သဘာဝကပေးတဲ့ ဆေးတှရှေိပွီးနပွေီးသားပါ။ ဆေးသောကျ ဆေးထိုးမှရယျ မဟုတျပဲ သဘာဝကွီးကပေးတဲ့ ဆေးတှရှေိတတျကွသေးတယျဆိုလညျးမထေ့ားလို့တော့မရပါဘူး…ပငျလယျကမျးခွဒေသေကို သှားခွငျးကလညျး သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကို အကောငျးဆုံးဖွဈလာစရာတှရှေိတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ ပငျလယျကမျးခွကေိုသှားရငျ ဘယျလိုအကြိုးတှရှေိနိုငျလဲ..အထူးသဖွငျ့ ဘယျလိုကနျြးမာရေးသုခတှဖွေဈလာနိုငျစသေလဲဆိုတာ….
(၁) ပငျလယျလကေ သငျ့ရဲ့အဆုတျကိုသနျ့စပေါတယျ
ပငျလယျလအေေးအေးလေးက A Little လေးတော့ အသားတှမေဲပငျမဲ့ သနျ့ပွနျ့တဲ့ပငျလယျလကေို တဝ ရှူရှိုကျရတာဟာသငျ့ ရဲ့အဆုတျကနျြးမာရေးကို အကြိုးပွုစနေိုငျပါတယျ။
(၂) ပငျလယျရေ ကအနာတှကေို သကျသာစပေါတယျ
ပငျလယျဆားငံရတှေဟော ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အရညျပွားရောဂါ ၊ အနာတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။
ဆားငံရညျတှနေဲထိတှခွေ့ငျးကအကွောအခငျြတှကေို အညောငျးပွစေပေါတယျ။ အရငျက ကိုကျခဲနာကငျြမှုကို ခံစားခဲ့ရသူတှတေောငျ ပငျလယျရနေဲ့ထိပွီးယူပဈသလိုသကျသာပြောကျကငျးသှားတာမြိုးတှရှေိပါတယျ။
(၄) စိတျကိုကွညျလငျလနျးဆနျးစပွေီး စိတျဖိစီးမှုကငျးဝေးစပေါတယျ
ပငျလယျကွီးကို မွငျလိုကျတာနဲ့လူတိုငျးရဲ့ရငျထဲမှာ အေးခမျြးကွညျနူးသှားမှာတော့အသခြောပါပဲ။ ပငျလယျ ဒသေရဲ့အငှသေ့ကျကို ရှူရှိုကျခံစားဖူးတယျဘယျသူမဆို ဈိတျဖိစီးမှုတှကေငျးဝေးပွီး စိတျအေးခမျြးသာမှုရှိစမှောအသခြောပါပဲ….